Kakade esahlukweni sokuqala lapho uPawulu ukhuluma ezimfundisweni eziyisisekelo uMoya oNgcwele noma LoMhlangano ukuphenduka, njengoba ukhuluma ngesikhathi esifanayo siyoba yini ithemba ebandleni futhi nokulindela, okungukuthi ukubuya kukaJesu.
Okokuqala, ayobe i yokufunda ebalulekile kumele kube ingxenye ebalulekile isisekelo nokushumayela Assembly sika. Libuye umcimbi okungukuthi ehlukile maqondana sikaJesu ebonakalayo eze emhlabeni, futhi esikhundleni incazelo yeNkosi ngubani sehlela ivela ezulwini ukubuyisa futhi ukudikiza nebandla lakhe yedwa. Ukuhlwithwa futhi sihlangane esibathandayo, ngubani kanyekanye ne ayobe kwabafileyo.
Ngenxa yokumelana ivangeli siba uPawulu kwadingeka abaleke, futhi ubhala izincwadi ukuze bakhuthaze ibandla lapho by uThimothewu uye wezwa nokuqinisela kwabo, ukholo nothando.
Ukuhlwithwa - an imfundiso ebalulekile
Abantu abaningi bayakuphika Ukuhlwithwa njengoba imfundiso ebalulekile noma ukufundisa. Amanye amaKristu aphike nje, noma kusho ukuthi kuyinto nje ukuze kuqondwe ngokomfanekiso noma njengesifenqo. Abanye bakholelwa ukuthi ayobe sikahle, kodwa ukuthi zithathelwe ezimfundisweni ezibaluleke kakhudlwana ezifana zintathu noma ukubhapathizwa.
Kusuka lapho, UPawulu wamisa ibandla futhi aze ubhala la izincwadi, kumayelana 6-12 izinyanga. Ngakho-ke kuyinto ngamanye amagama ibandla young kakhulu ukuthi uPawulu ubhalela. Kodwa ngisho noma laba bantu, sasivumela entsha okholweni, kufihlwa noma ivinjelwe uPawulu cha ukufundisa noma ukhulume ukubuya kukaJesu.
Usuvele esahlukweni sokuqala lapho uPawulu ukhuluma ezimfundisweni eziyisisekelo ngaMoya Longcwele (kuvesi ka 5) noma LoMhlangano ukuphenduka (vesi 9), ngakho ngenkathi ukhuluma ke ukuba ithemba ebandleni futhi nokulindela, okungukuthi ukubuya kukaJesu (v 10).
Wazalelwa phakathi noshushiso
Isonto eThesalonika wazalelwa futhi waphila ushushiso njalo ngenxa yokholo lwabo. Bona babebone ushushiso efanayo amaJuda, ukuthi kokubili uJesu nabaprofethi wayeke wazibonela (v14).
Lezi zincwadi isikhuthazo ebandleni ukuba baqhubeke behamba okholweni ngokukhuthazela kwabo eNkosini. Phakathi ushushiso olukhulu nokuhlupheka bawamukela ivangeli, futhi babephendukile bezithombe zakhe. Manje adluliselwe uJehova futhi bakhonza umuntu uNkulunkulu weqiniso kuphela.
Uma sifuna ukuchaza futhi uchaze ukuthi yini ayobe liwukuthi, kukhona izinhlangothi eziningi kanye izici nalowo kungaba ukusho:
Okokuqala, ayobe i yokufunda ebalulekile kumele kube ingxenye ebalulekile isisekelo nokushumayela Assembly sika. Libuye umcimbi okungukuthi ehlukile maqondana sikaJesu ebonakalayo eze emhlabeni, futhi esikhundleni incazelo yeNkosi ngubani sehlela ivela ezulwini ukubuyisa futhi ukudikiza nebandla lakhe yedwa. Ukuhlwithwa futhi kwaba injabulo ukuhlangana esibathandayo, ngubani kanyekanye ne ayobe kwabafileyo.
Akukho zithembiso pre-ukufinyelela mayelana ayobe wesonto okukuleyo "okuseduze" noma okuhlobene. Lokhu kusho ukuthi isonto kufanele baphile ngilindele njalo nokubuya kweNkosi, nokuthi uJesu imayelana asibuyisele ekhaya. Ngenkathi uchazwa ngokuthi ngenhla nasesikhathini ukuphefumula efanayo osizini olukhulu, okusho kuba yingxenye yenqubo ukuthi omula futhi iqala usuku Nkosi noma usizi. Ngesinye isikhathi iNkosi ukunika isibambiso ebandleni ukuba kungabi ingxenye.
Ukuhlwithwa - HARPAZO
1 Thesalonika 4: 16-17 - Ngoba lapho umyalo elikhulu, izwi le-eyinhloko kanye trump kaNkulunkulu, iNkosi ngokwayo kuyakuba wehla ezulwini. Futhi kuphela nabafileyo kuKristu bayovuka. Khona thina, esisekhona sisasele siyakuhlwithwa shi (harpazo) emafwini ndawonye nabo sihlangabeze iNkosi emoyeni. Futhi kanjalo kuyakuba singahlala neNkosi.
Igama elithi "Ukuhlwithwa" ivela leli vesi leBhayibheli lihunyushwe kwelesiHeberu elithi "harpazo" ukuze 'zibanjwe up. " Leli gama "harpazo" kuphela okukhulunywa izikhathi 13 e-NT futhi isetshenziswa kuphela ku-1 Thesalonika 4 mayelana ayobe kwebandla.
"HARPAZO" (babe-pad-zo) kuyinto isiGreki lisho "poach 'bathathe noma baqonde kungazelelwe. Harpazo waba izwi Latin "raptus," okuyobe baba igama lesiNgisi elithi "Ukuhlwithwa." ESweden siye elihunyushwe welithi "Ukuhlwithwa" nge Ukuhlwithwa.
Kuyathakazelisa ukubona indlela izwi isetshenziswa kanti kuchazwa ku NT ngoba isenza siqonde okushiwo izwi, futhi ukuqonda okwamanje Assembly liba wahlwithelwa uJehova wamhlangabeza emkhathini. Sihlangana izwi harpazo kokubili mayelana noJesu, uPawulu, uFiliphu, uJohane uMbhapathizi noJesu uthembisa ezinganeni zaKhe.
2 Korinte 12: 2 - Ngiyamazi umuntu ekuKristu, sekuyiminyaka eyishumi nane edlule wabanjwa up (HARPAZO) kuze izulu lesithathu - ukuthi kwakusemzimbeni noma ngaphandle komzimba angazi.
UPawulu wabanjwa phezulu ezulwini lapho yazihlanganisa ngezimfihlakalo kaNkulunkulu. Lona leli gama HARPAZO liyasetshenziswa kaJesu kusAmbulo ukuchaza Ascension emva kokuvuka
IsAmbulo 12: 5 - Futhi Wabeletha ingane, indodana, eyayizobusa zonke izizwe ngentonga yensimbi, nomntanakhe wahlwithelwa (HARPAZO) kuNkulunkulu nasesihlalweni sakhe sobukhosi.
Mathewu 11:12 - Futhi kusukela ezinsukwini zikaJohane uMbhapathizi kuze kube manje umbuso wezulu sesimeni ubudlova, futhi amadoda udlame ucindezele (HARPAZO) it.
Mayelana John inkonzo uMbhapathizi sika kuba igama HARPAZO naye wasebenzisa. Lapho uJesu esejele, ukhuluma ngomqondo ongokomfanekiso ngoJohane ngokuqondene (okuhle) ubudlova futhi thugs abacindezela isibhakabhaka. (Thatha ngamandla eng. Translation) ukuze kuqaliswe ukusebenza into ngenkani / amandla kuyinto incazelo yegama elithi HARPAZO.
Lapho iNkosi eza ukuqoqa abantu bakhe, yena uyokwenza ongazihlwitha iPhalamende ngezikhwepha.
IzEnzo 8:39 - Lapho efika ephuma emanzini wayedabule (HARPAZO) Lord kude uFiliphu, umthenwa bembona engasekho, kodwa waqhubeka nendlela yakhe ejabula.
Philip wayekade ngengelosi obizwé iNkosi ukwehla ngomgwaqo uya ovela eJerusalem oya eGaza. Lapho uFiliphu hits i umthenwa ongumTopiya ngubani uFiliphu eshumayela ivangeli. Lapho uFiliphu sesiqedile umsebenzi wabo ngokugcwele, eshumayela ivangeli futhi wabhapathiza umthenwa, uFiliphu Ufika kumukwe iNkosi kwenye indawo emhlabeni.
Ukuze abathathwa Ngamanye amazwi baba wathutha e isevisi ephakeme eNkosini, noma lasemhlabeni noma lasezulwini.
Akekho ongazihlwitha nawe esandleni leNkosi
NgokukaJohane 10: 28-29 - Ngizinika ukuphila okuphakade futhi kazisoze zabhubha laphakade, futhi akekho umuntu oyozihlwitha (HARPAZO) esandleni sami. Lokho uBaba anginike khona kukhulu kunazo zonke, futhi akekho ongazihlwitha (HARPAZO) esandleni kaBaba.
Lena ndima emangalisayo ebonisa ukuthi inhliziyo uMalusi analo izimvu zakhe. Usazi, silalela izwi lakhe futhi zimlandele. Isithembiso sokuthi usinika wukuthi akekho okufanele bakwazi 'isihlwithe "esandleni sakhe. UBaba unikeze iNdodana ayikwazi ukweba futhi.
Kusinika insindiso ukuphepha kanye ngokuqiniseka ukuthi akukho lutho olungasehlukanisa nothando lukaNkulunkulu kuJesu. USathane noma izimo, ngamanye amazwi, musa isihlwithe kude kuye.
Ukuhlwithwa kuyinto ahlobene
1 Thesalonika 4:15 - sithi kini ngezwi leNkosi, ukuthi thina, esisekhona sisasele kuze kube sekufikeni kweNkosi ngeke ukuvimbela yiziphi silele
1 Thesalonika 1:10 - Futhi balindele iNdodana yakhe ivela ezulwini, amvusayo uNkulunkulu kwabafileyo, uJesu uye wasikhulula intukuthelo ezayo.
Omunye ingxenye ebaluleke kakhulu ayobe siwukuthi "okuseduze," okusho kuhlobene, futhi into olindele kungenzeka nganoma isiphi isikhathi.
Ukuhlwithwa Ngamanye amazwi, i engabhalisiwe oluzayo, futhi kunezinye amazwi, akukho izimpawu engokwesiprofetho sibandulele ayobe, noma into Assembly kufanele bazazi kuzokwenzekani ngaphambi ukuthi lesi senzakalo kungathatha indawo.
UPawulu usebenzisa igama elithi "thina" lapho ikhuluma labo sisasele kuze kube sekufikeni kweNkosi, okusikisela ukuthi ayobe ngokuyisisekelo kakade kungenzekani ngesikhathi uPawulu.
Jakobe 5: 8 - Be nani isikhathi eside futhi uqinise izinhliziyo zenu, ngokuba ukufika kweNkosi kuseduze
Track yosuku lukaPawulu kwaba nokubuya kweNkosi eduze, futhi ukhuthaza ibandla ukuba siphile belindele njalo likaJesu livela ezulwini.
Lapho sikhuluma uhumusha isikhathi nathi esiphila, futhi bakholelwa ukuthi singabantwana isizukulwane ukuthi bayothola nokubuya kweNkosi, kungenxa yokuthi siqhathanisa umlingiswa ongokwesiprofetho losizi. Ngenxa izimpawu singabona ukuthi uSuku lweNkosi siyasondela, nokuthi imihelo sokuzalwa kwandise. Ngamanye amazwi, izimpawu ngaphakathi kanye nabangaphandle ebonisa ukuthi 70 kanti ngesonto eledlule zeminyaka siyasondela, futhi ngaleyo ndlela futhi ayobe kwebandla.
Lapho siphila ukulindela nsuku zonke ngoba iNkosi ukuba sibuye, it kudala kokubili injabulo förväntningens kanye ukulangazelela ngokuza kwakhe.
Ukulindela kwenza umakoti ulungela, futhi siphile imphilo lengcwele, futhi ngabelwa nomkhwenyana wakhe olandelayo. Iphinde kudala isidingo a lwesintu elahlekile uJehova ufuna ukufinyelela nothando lwakhe kanye namandla okusindisa. Kwenza le zaziziningi ezinhle ezibonakalayo kusho kancane maqondana qiniso elingokomoya izinkulungwane zabantu uhlangabezana nsuku zonke lapho beya iphakade ngaphandle kukaNkulunkulu futhi ngaphandle kwethemba.
Esikhathini esifanayo, ngasekupheleni kwawo-1800, lapho uJehova avuswe yesikole we ayobe ahlobene, emhlabeni yabhekana enkulu yezithunywa zevangeli kanye kwevangeli izikhathi namuhla emlandweni. Kanyekanye izwi eliyisiprofetho baba ephila, ashiswa gospel umlilo emhlabeni wonke.
Izincwadi ezabhalelwa Isonto eThesalonika kuyinto incwadi kaPawulu lokuphela kwezwe. Ngakho nathi kumelwe silindele ukuthi uPawulu bobabili ayifundisa futhi basho izenzakalo kubalulekile ukuthi ayobe, le performanc Umphik'ukristu usizi.
2 Thesalonika Ungomunye izinhlamvu inkani kakhulu eTestamenteni Elisha, maqondana iphuzu isikhathi sokuba ayobe ibandla likaNkulunkulu.
Kuvele parish okuyisibonelo
Ngezindlela eziningi, ibandla wasibekela isibonelo amanye amakholwa (1 Thesalonika 1: 8). Kwakuyisikhathi isonto owawuhlala ukulindela njalo nokubuya kweNkosi. Bona babephendukile kwezithixo, walindela manje uJesu isambulo esivela ezulwini (1 Thesalonika 1:10).
Encwadini yakhe yokuqala ukuthi uPawulu usinxusa Assembly siqhubeke sifeza imisebenzi yabo futhi baphile ukuphila okuvamile, ngesikhathi esifanayo ukuthi babezindla nilindele uNkulunkulu (4: 11-12). Ududuza kubo nangokuzama usitshela ukuthi sizokwenza futhi ubone abathandekayo asebethole gone ekhaya phambi kwethu, lapho abafileyo kuphakama kanyekanye ne ayobe ephila.
incwadi yesibili kaPawulu
incwadi yesibili kaPawulu kulotshiwe ezinyangeni eziyisithupha kamuva kulokuqala. Uyabhala esontweni ukuze alungise futhi ulungise amahemuhemu kanye izimfundiso zamanga zase ubambile eMkhandlwini.
Ibandla lase wayethukile futhi bedidekile mayelana nosuku lweNkosi, futhi domstid ezizokwehlela emhlabeni wonke. I amahemuhemu kanye incwadi nezinsolo kuPawulu, wacabanga manje ebandleni ukuthi kakade base ngaphakathi lokhu domstid okuyilona elisebenzayo futhi usizi.
Lokhu kwaba into ukuthi uPawulu wayengenzanga wachaza ngokucacile ngamazwi aphinde ngokusebenzisa incwadi yakhe yokuqala eyayiya kwabaseThesalonika. Ngakho-ke yena ubhala lokhu encwadini ukucacisa futhi ulungise lezo ukungaqondani.
usuku lweNkosi, ulaka lukaNkulunkulu LoMhlangano Ukuhamba
Encwadini kukaPawulu kwesibili lokuphela kwezwe abaseThesalonika ikakhulukazi ezindaweni ezine ukuthi ngifuna ukubhala futhi ugxile ngubani nosuku lweNkosi, ulaka lukaNkulunkulu (Orge), Lowo uyazibamba, futhi igama elithi "apostasia", okungase kusho imfucuza noma ukuhamba (ayobe) .
Ekugcineni, sibheke kancane ikakhulukazi akweyesi-2 Thesalonika 2:13, ngemva ukuhlolisisa kuyinto ivesi ezimangalisayo ukhuluma kokubili kufakazela futhi ifingqa ezingamaGreki ekufundiseni kukaPawulu kuSigungu kwi umhuheko ngaphambi kosizi.
2 Thesalonika 2: 1-2 - Uma kuziwa weNkosi yethu uJesu Kristu nokubuthelwa kwethu sabuthanela kuye, sikucela, bazalwane, ukuba kungazelelwe alahlekelwe ukuzibamba yakho noma uyokhathazeka, kungaba noma yimuphi umoya noma ngezwi noma incwadi, ethathwa njengefanele kithi nokuthi kusekelwe nosuku lweNkosi sesifikile.
1 Thesalonika 5: 2 - Uma izikhathi nezinkathi, bazalwane, akudingeki ukuba nginilobele. Uyazi kahle kakhulu ukuthi usuku lweNkosi kuza nesela ebusuku. Lapho abantu bathini, "Ngukuthula nokuhlala kahle," base babhujiswe ngokuzumayo njengoZamcolo ubuhlungu athole owesifazane okhulelweyo, abasoze baphunyuka. Kodwa nina bazalwane, anikho ebumnyameni, ukuba lolo suku lunifice njengesela.
Okokuqala, kubalulekile ukucacisa lokho osukwini lweNkosi ngempela. Abantu abaningi abaziphatha futhi sibhekisela nosuku lweNkosi njengoba usuku okulinganiselwe kanye latsite yamahora 24, ebanjwa ekupheleni kosizi lapho uJesu ukubuya ebonakalayo. Kusho Ngakho ukuthi usuku lweNkosi kanye umhuheko kuyahambisana futhi uyaphuma kwenye.
Mhlawumbe ivesi ocashunwe kakhulu nje-1 Thesalonika 5: 2, lapho ukhuluma ayobe ngokuqondene nosuku lweNkosi. Njengoba usuku lweNkosi ngendlela efanayo ukuthi uJesu uza njengomlilo 'nesela ebusuku "ukuthi uxhuma uvame edidekile lezi zigigaba ezimbili.
Kodwa Ukubukeza amanye amavesi eBhayibheli akhuluma uSuku lweNkosi libonisa ukuthi nje kuphela ubheke nosuku olulodwa, kodwa ngesikhathi sokwahlulela ukumboza kokubili Nosizi, uJesu ukubuya ebonakalayo kanye Eyinkulungwane.
UJoweli 2: 11-20 - Day lweNkosi zihlanganisa ukuhlasela okuvela isitha ovela enyakatho, abaningi bakholelwa kuyoba ukuhlaselwa efanayo esikubona Hezekeli 38-39. Abaningi bakholelwa ukuthi uGogi / noMagogi impi kwenzeka engxenyeni yokuqala Nosizi.
Joweli 3: 4 - Nangu nosuku lweNkosi kuboshelwe ukubuya kukaJesu ebonakalayo futhi ukwahlulela kwakhe phezu kwezizwe.
2 Petru 3: 10-23 - Lapha nosuku lweNkosi akazange zibhekisela ukubuya kukaJesu ebonakalayo ke siyazi ukuthi usuku izindikimba zasezulwini eziyoncibilika, bese sithola amazulu amasha nomhlaba omusha kuqala emva 1,000 iminyaka yombuso emhlabeni.
Kuhle kwesela ebusuku
UPawulu uchaza uSuku lweNkosi njengoba umcimbi kuyokushiya umangele futhi njengesela ebusuku. Lapho leli zwe ungalindeli ke, it kuthanda ngokuzumayo nje futhi ngendlela efanayo njengoba lapho owesifazane engatholi sokubeletha bese uzibiza zwe.
UJesu Kristu namuhla kuphela isambulo NT. Usuku lweNkosi akuyona nje isambulo OT, kodwa isikhathi Ukwahlulelwa kwezizwe kuyinto enemininingwane ngaphezulu NT futhi ikakhulukazi ezichazwe kusAmbulo izahluko 6-19. "Usuku lweNkosi 'ngokuphathelene nomhlaba nabantu emhlabeni ngenkathi uJesu Kristu namuhla ngokuphathelene NT Ukuhlwithwa Assembly kanye nokulungiselela phambi ngoBaba osezulwini.
Uma kuziwa kaJesu Kristu namuhla, kuba benämnelse mhla uJesu uyofika ngamafu ukuze uthole ibandla lakhe amandla okugcwele yena.
Betydningen lokhu leli vesi wukuthi uMoya oNgcwele njengathi ngePhentekoste eqala umsebenzi wakhe ngokukhetha abantu wasezulwini, kuzothatha ngokugcwele futhi wenza laba bantu ngamandla alo eduze uJesu Kristu namuhla, ukuthi eceleni kukaJesu ukuze alethe ekhaya nebandla lakhe lasezulwini zokuhlala - okuyinto ngaleyo ndlela senzeka phambi usuku lweNkosi.
Ilondolozwe Kahle Lord intukuthelo (Orge)
A jikelele indaba ephathwayo
Bobabili la mavesi eBhayibheli futhi into esasivela NT wukuthi isonto akulona imiselwe ukuhlupheka ulaka, kodwa esikhundleni abasindiswayo walondoloza kuwo.
Igama elithi "kusukela" (ek) ingahambi, kodwa kunalokho ukuqhela noma ubani nanoma yini ngokoqobo. UJesu usebenzisa gama lapho lifundisa ukuthi "kokukhipha ipulangwe esweni lakho siqu" kuMathewu 7: 5th Ugongolo noma imbande ke ngokwenyama isuswe usuku kude, futhi besaba ingxenye iso.
Uma siye lezi zithembiso zisuswe futhi walondoloza olakeni lukaNkulunkulu, indlela ibandla kungaba khona phakathi nosizi?
Up 19:15 - The izixuku zasezulwini zamlandela zikhwele amahhashi amhlophe, egqoké embethe okumhlophe ngendwangu yelineni esihlanzekile. Emlonyeni wakhe kwaphuma inkemba ebukhali, ukuze kufanele ishaye izizwe, futhi yena uyakuzibusa ngentonga yensimbi, futhi linyathele uNkulunkulu, uMninimandla onke, lentukuthelo yolaka (orge) sewayini
Ekupheleni osizini igcwaliswe ulaka lukaNkulunkulu, futhi sihlangana ke okokugcina lapho uJesu eza ukunqoba futhi uwine anqobe izitha zakhe e-Armagedoni.
Uma isonto has isithembiso kokuba walondoloza kusuka lokhu domstid kusukela ekuqaleni kuze kube sekupheleni, + ngakho-ke Kucacile ukuthi iSonto akakwazi ukuhlala emhlabeni lapho sibizwa baphula uphawu lokuqala. UPawulu uqinisekisa lokhu kamuva 2 Thesalonika, lapho efundisa izenzakalo kumelwe lokuqala lwenzeka phambi lokhu domstid ezokwenza phezu komhlaba.
2 Thesalonika 2: 3 - Makungabikho muntu onikhohlisayo nangayiphi indlela. Ngoba, okokuqala, imfucumfucu kumele woza umuntu ongenamthetho, indodana yokulahlwa, obala eze phambili
UPawula ufundisa ukuthi ibandla ngengxabano ezibalulekile futhi nganquma ngathi, okungukuthi ukuthi isonto ayikwazanga alindele ukuthi usuku lweNkosi (usizi) uzofika kuyena kungakapheli izenzakalo ezintathu ezimqoka kuzokwenzeka:
Imfucuza (apostasia) kumelwe sifike, omunye ophethe emuva ziyokwehlela kwisayithi, futhi laglösthetens indoda (Umphikukristu) obala eze phambili (IsAm 6: 1)
I incazelo yegama elithi apostasia
Igama ngesiGreki lihunyushwe imfucuza, nokukhohlisa ukwambuka igama elithi "apostasia". Ibizo "apostasia" livela esenzweni esithi "afistämi" kabani huvudbetydning is "ezihambayo" noma "ukuhambisa into kusuka endaweni eyodwa kuya kwenye." Igama isetshenziswa ngqo maqondana nanoma ezihambayo kusuka endaweni eyodwa kuya kwenye, noma uma uhamba noma kuhlukile othile.
Sithola apostasia izwi kabili kuphela NT, lapho elinye encwadini yezEnzo 21:21 lapho ukhuluma 'ukulahla kuMose: "noma ukuhlubuka kuMose. Ngenkathi apostasia Ibizo akuvamile kuleli NT, kukhona isenzo afistämi ukuthi izwi isuselwe izikhathi eziyishumi nanhlanu. Kuphela ezimweni ezintathu libhekisela yokuhlubuka okungokwenkolo. (1 Tim.1, Heb 3:12 no-2 Thimothewu 2: 9).
Emacaleni angu-nambili asele owenza afistämi "ukuhambisa kude," kungaba umuntu (Luka 4:13; IzEnzo 12:10), ukungalungi (2 Thimothewu 2:19), livela ethempelini (Luka 2:37) noma umzimba (2 Korinte 12: 8).
Esikhathini English Bible, i-Amplified Bible, kukhona laphansi: "Umuntu kungenzeka lihumusha apostasia ice: Ukuhamba (wesonto).
Okuhunyushiwe zokuqala eziyisikhombisa English kusuka yakho 1394 - 1608, wonk 'umuntu kwakumelwe eyahunyushwa igama elithi "ukuhamba" (suka) okuhloswe ngaso ayobe. Kwenzeka kanjani ukuba i-King James Version njengoba yezinguqulo sokuqala ngqa ukusebenzisa izwi imfucuza esikhundleni sokuhamba?
Apostasia izenzakalo ezingokomlando
1576 kwafika translation Catholic isiZulu futhi ngokuthi "Rheims iBhayibheli". Kwakuwusuku inguqulo yokuqala ukuthi wasebenzisa imfucuza izwi esikhundleni sokuhamba (Ukuhamba).
Kotolikerna wasebenzisa le nguqulo ukuze ukhombe "imfucuza" ezandulela 1500 ngokusebenzisa eNkathini Yezinguquko.
Ngakolunye uhlangothi, 1611 lapho iBhayibheli lesiZulu elivamile yanyatheliswa abahumushi elibuyekeziwe bona ukuba izinguqulo wangaphambilini kusuka kokuhamba sokuchitha ukuze ukhombe nezimfundiso zeSonto LamaKatolika yayo njengoba Ukuhlubuka Okukhulu. It kwakungekhona ukufunda noma incazelo yegama elithi apostasia ubani lesi sinqumo, + kodwa ubani Ukufundiswa kuya eSontweni LamaKatolika.
Ukuhlwithwa - umcimbi othize
Kuyokwenzekani ngempela uPawulu lapho elikufundisayo nesenzakalo esithile eziyokwenzeka nje ngaphambi kokuqala kosizi?
apostasia ngesiGreki okungukuthi has a lesiGreki eliwumunci (okuyinto igama lesiGreki angavamile) eyenza uPawulu uphawula ukuthi isenzakalo esithile elinqunyiwe, hhayi into kwenzeka ngokuhamba kwesikhathi.
ImiBhalo eminingi khuluma abuye afakaze ukuhlubuka ezinsukwini zokugcina. (1 Thim 4: 1-2, 2 h 3: 1, 1 Johane 2: 1). Inkinga wukuthi akekho lemibhalo lusekele zibe yihlane ethize noma umcimbi othize ukugqamisa futhi abe yisibonakaliso sobala kubo bonke abakholwa izikhathi kuphele. Zonke izindima zeBhayibheli ukhulume ukuhlubuka ezinsukwini zokugcina konke futhi asisitsheli esenzakalweni esikhethekile. Njengoba sazi, kwaba esikhundleni imfucuza futhi badlubulunda uJehova ngaso sonke isikhathi. Jude ukhuluma kakade kwenzeka ngesikhathi sabaphostoli. (Jude v 17 ff)
Ukuhlwithwa Nokho, umcimbi ocacile, futhi into akwenzeki phezu isikhathi esijana. Kuyoba uhlamvu unique ebonisa ukuthi izikhathi kuphele futhi esiphethweni ifinyelelwe.
Ngesikhathi esifanayo, kuba nenkinga uma uPawulu akazange aye okukhulunywa lokhu kusaphaza okungaka encwadini yakhe yokuqala eya ebandleni.
Incwadi yesibili eya esontweni kuyinto incazelo yokuthi yini okulotshwe Ukuza lokuqala nelesibili kaKristu umcimbi ukuthi kokubili ezishiwo phansi ecacile eThesalonika. Elikhulu cishe zonke isahluko sale ncwadi ukhuluma nokubuya kweNkosi futhi ukuthuthukiswa ekupheleni-time, kodwa alibe lutho mayelana yihlane njengoba isenzakalo esibalulekile futhi eyingqayizivele ezokwenza sibandulele uSuku lweNkosi nokuza Umphikukristu.
Ngakho-ke isiseduze ukukholelwa ukuthi uPawulu ukhuluma ngama-sekufikeni kweNkosi e-1 Thesalonika 4:17 kunokuba yihlane ethize umbhalo akusho ngenye yisho.
2 Thesalonika 2: 6-7 - Uyazi ukuthi kunjani manje ubambe kuye emuva, ngakho angayigcina ziyaphuma kuphela uma kufike isikhathi sakhe. Kakade, imfihlakalo yokungabi namthetho usebenza. Lowo manje ophethe emuva kuzobalwa kuphela usule endleleni.
Amavesi 4-8 kuso lesi sahluko wembulela Ukristu, kanti lo okunguyena ophethe kuye emuva ukuze ayikwazi ukuvela ngaphambi kwesikhathi sakhe. Namuhla, sibhala 2014, futhi asikwazi ukuqinisekisa ukuthi noma lowo ophethe emuva namanje lapha uma Umphik'ukristu alikafiki phambili.
Ngekweluhlelo iba ebambe uphinde achazwe ngokuthi kokubili "ke" futhi "yena". Umoya zwi uMoya oNgcwele elithi "pneuma" ngesiGreki, okuyinto izwi kungenjalo kungayiwa ocansini. Ngesikhathi esifanayo ukuthi uMoya oNgcwele futhi kuNkulunkulu, kuchazwa ngokuthi "yena". Sekube izibikezelo eziningi ngokuthi yini bevimba Ukristu, kodwa kokubili okungenabulili ngenkathi wesilisa akufanele ngaphandle ngoMoya oNgcwele.
UMoya Ongcwele esontweni
UMoya oNgcwele kuhlobene eduze esontweni, futhi ubelokhu kusukela ngosuku lwePhentekoste APG Isahluko 2. GT kwakubonakala uMoya oNgcwele ibuye emhlabeni, kodwa kunalokho sizindza phezulu. Njengoba ayokwenza nosizi.
Moya Longcwele uzoqhubeka asebenze abantu usizi, kodwa okwamanje uppryckelsens kusuka ngenhla. Ngakho-ke, sibona ayisekho uMoya oNgcwele emelelwa eSahlukweni 3 Encwadi YesAmbulo nangale. In the izincwadi kumabandla ayisikhombisa, sizwa la mazwi: Olendlebe zokuzwa, makezwe lokho akushoyo uMoya ebandleni. Ngemva Isahluko 3, okuyinto ayobe iPhalamende ayisekho uMoya oNgcwele okhuluma. IsAmbulo 13: 9 - Olendlebe zokuzwa, makezwe. Nor is uMoya oNgcwele eliza insindiso ahlukene nesigijimi sesahlulelo kubantu osizini, kuyobe esikhundleni kwenziwe yizingelosi. (IsAm 14: 6-7).
Lapho uMkhandlu eba wabanjwa uMoya oNgcwele lingenandawo ukusebenza kusuka ke Assembly ethempelini kuphela ukuthi uNkulunkulu uyazi namuhla. (1 3:16). Ibandla kuphela umelwe in kosizi skökoförsamlingen futhi kwangathi uMoya oNgcwele akusho usebenza noma ngaphandle.
Ukuhlwithwa e 2 Thesalonika 2:13
2 Thesalonika 2:13 - Kodwa nakanjani ukubonga uNkulunkulu njalo ngani bazalwane abathandwa yiNkosi, ngokuba kwasekuqaleni uNkulunkulu kusukela ekuqaleni ukukhethile ukuba insindiso, ekungcwelisweni koMoya, langokholo lweqiniso.
Eng Trans. "Kodwa thina sifanele ukubamukela Makabongwe uNkulunkulu njalo, bazalwane abathandwa beNkosi, Good Ngoba wakhetha, isithelo sokuqala, ngokwengeziwe sokukhululwa ukungcweliswa koMoya, langokholo lweqiniso."
Into yokuqala ukuthi Kubalulekile ukusho ngokuqondene leli vesi ukuthi kuyakhulunywa uxhumano yalezi incwadi lokuphela kwezwe wembulela imfundiso "osukwini lweNkosi."
Isahluko egameni elandulela (Isahluko 2) UPawulu wayekhathazeka nje afundisa ibandla mayelana umuntu ongenamthetho, okumele kuqala eze phambili engafihlekile. Sibona Ukristu ukuvela ngesikhathi uphawu lokuqala, futhi lapho ihhashi elimhlophe livela.
Kungenzeka yini ukuthi lokhu ukwazisa insindiso uPawulu uzwakalisa elivela kuleli vesi, insindiso efanayo ukuthi tantly abaye bayifundisa e izincwadi ezimbili ukudalula ulaka lukaNkulunkulu? Kulokhu, it kungobunye isiqinisekiso kaPawulu yansukuzonke indaba ephathwayo weBandla, okungukuthi ekulondolozeni beNkosi ukulondolozwa lolaka lukaNkulunkulu futhi usizi.
Ukuze siqonde leli izwi sensindiso (soteria) ukuthi uPawulu usebenzisa, nawe kufanele ulichaze emva komnyaka ngalesi sikhathi lapho ngemvume.
Insindiso izwi (. Gr Soteria) inencazelo elandelayo ENG; deliverence, ukulondolozwa, ukuphepha, insindiso: ulungiselela ukukhululwa esimisweni ekunukubezweni zezitha.
Kusukela leli gama lisetshenziswa ngokunganaki eTestamenteni Elidala, singabona ukuthi okushiwo izinguquko zamagama, esikhathini esizayo siyokwamukela isikhathi isihlobo ukuba ngesikhathi kulotshwa izinhlamvu.
Insindiso eTestamenteni Elidala
OT, sithola igama elithi izikhathi 78 futhi ngokuvamile ezihlobene igama lesiHebheru Yeshu'ha. Iningi izikhathi leli gama lisetshenziswa ngokunganaki eTestamenteni Elidala, ixhunywe asindiswa kanjani ngokoqobo ezitheni noma izilingo yesikhashana Israyeli.
Sibona phakathi kwabanye ngokukhululwa kuka-Israyeli eGibhithe, lapha, uma baya ngokuwela uLwandle Olubomvu. Iphinde isetshenziselwe lapho uDavida wabakhulula futhi ebugqilini uSawulu abashushisa, futhi insindiso ka-Israyeli ezitheni zemvelo like amaFilisti, abakwaMowabi nabakwa-Edomi.
Isaya usebenzisa leli gama kokubili ukuchaza wokutakula sika-Israyeli ukubuya kukaMesiya, kodwa futhi ukuchaza isivumelwano esisha uJehova uyomisa no-Israyeli ongokomoya futhi.
Insindiso ku NT
ITestamente Elisha igama elithi "Soteria" esetshenziswa kokubili engozini (IzEnzo 7:25, 27:34), kodwa ngaphezu kwakho konke ngokuchaza insindiso ezingokomoya sesamukele ngoJesu ngokufa esiphambanweni. (Fil 1:28, 2 Kor 7:10 Efe 1.13)
Siyabona ukuthi lokho okushiwo yile izwi kungaba kokubili insindiso okungokomoya, futhi insindiso ngokomzimba engozini yesikhashana noma ngenxa yezimo. I GT ugxile kakhulu ingozi ngokomzimba ngenkathi iningi NT imele umuzwa insindiso ezingokomoya.
ITestamente Elisha Lalotshwa inkathi eyiminyaka engaba ngu-60, abalobi ezahlukene. Okwakushiwo insindiso izwi (soteria) kungahunyushwa kokubili maqondana nesikhathi yalotshwa, futhi lapho umlobi wasebenzisa igama.
Le ncwadi cishe yabhalwa ngemva izincwadi ezabhalelwa abaseThesalonika kwaba 1 Korinte, lapho igama elithi "Soteria" never esetshenziswa. Kuyinto kuphela esisencwadini kaPawulu yesibili kulo ibandla labaseThesalonika Korinte izwi sisetshenziswe futhi. Igama elisetshenziswe lapha kathathu, futhi lokho lapho siqala ukubona izwi esisetshenziswe ngokuqondene naleli insindiso ezingokomoya.
Kubonakala sengathi ngesikhathi uPawulu esebenzisa leli gama ezincwadini zakhe ekuseni, usaqhuba kuthonywa indlela GT isebenzisa leli gama, futhi ngaleyo ndlela kuba incazelo insindiso evela ngokomzimba noma ingozi yesikhashana noma ngenxa yezimo. Lapho uPawulu izinhlamvu ngokusebenzisa leli gama ne betydning iningi insindiso ezingokomoya.
Brevens ngokusebenzisa isihloko
isahluko 1 no-2 Thesalonika ngamunye ukudalula noma yikuphi kusho ukubuya kukaJesu, futhi imfundiso kaPawulu lokuphela kwezwe. Kunjalo-ke nangobufakazi Ngamanye amazwi ezihlobene ukholelwa ukuthi le nsindiso uPawulu akhuluma ngalo e 2 Thesalonika 2:13, futhi adalule futhi iwukuqhutshwa isihloko, UPawula ufundisa.
Ukubukeza 2 Thesalonika isahluko 2 ubonisa ukuthi Lesehluko siniketa:
1. Isexwayiso (vs. 1-3)
3. elingenamthetho eyodwa siyavela (vs. 3-5)
4. ogodla (vs. 5-7)
5. Ukristu performanc kanye sokufika (vs. 8-9)
6. Usuke eduke nokukhohlisa abantu (amavesi 10-12)
7. sabonga uJehova futhi ucingo, (vs. 13-15)
UJesu ukhomba izinhlamvu eziningi ukulandela ukubuya yakhe ebonakalayo kulomhlaba. Kodwa ayobe umcimbi engabhalisiwe, futhi ucingo iPhalamende hhayi elinde Umphik'ukristu noma isivumelwano sakhe asenza no-Israyeli, kodwa 'balindele iNdodana yakhe ivela ezulwini. "
Siphila sihlale sikulindele ukuthi iNkosi maduze uzofika futhi ukusenza ekhaya, ukuze usisindise intukuthelo ezayo, futhi ukuba abe nabo ingunaphakade.
UJesu uyeza maduze!
Vecka 24, fredag 18 juni 2021 kl. 01:16